RE / MAX Simba Property Management
Real Estate Listings: » Real Estate Agent Directory » Property Managers » US » Oklahoma » Oklahoma City » RE / MAX Simba Property Management1
Kugadziriswa kwekupedzisira 2019-10-25
Post Code: 73099
RE / MAX Energy Property Management ndiyo yakanakisa manejimendi manejimendi muOklahoma City nenzvimbo dzakatenderedza, Isu tinopa nzira yakazara kune manejimendi, iyo inotarisira izvo zvinodiwa nevose varidzi vezvivakwa uye maroja. Chikwata chedu chinoshanda nesimba kuchengetedza kukosha uye kuwedzera kudzoka kwezvivakwa, nepo zvichipa varidzi nzvimbo yakanaka yavanogona kudaidza kumba.
Bata mushambadzi 405-919-xxxx
Oklahoma ((teerera)) inzvimbo iri kuSouth Central mudunhu reUnited States, yakaganhurana nenyika yeTexas kumaodzanyemba uye kumadokero, Kansas kuchamhembe, Missouri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva, New Mexico kuchamhembe. kumadokero, uye Colorado kuchamhembe kwakadziva kumadokero. Iyo ndiyo makumi maviri-yakanyanya kuwanda uye iyo makumi masere neshanu-zhinji-zhinji ve50 United States. Vagari varo vanozivikanwa seOklahomans (kana colloquingly, "Okies"), uye guta rayo guru uye guta hombe iOklahoma City. Iro zita rehurumende rinotorwa kubva kuChoctaw mazwi okla uye humma, zvichireva kuti "vanhu vatsvuku". Zvinozivikanwa zvakare zvisina kujairika zita rayo rekuti, "Pasina nguva State", zvichireva nezvevasiri maNative vagari vakaisa zvichemo zvavo pasati pasvika zuva rekutanga kuvhurwa kwenyika munzvimbo dziri kumadokero Oklahoma Territory kana pamberi peIndia Applicationations Act ya 1889, iyo yakawedzera pekugara kweEurope-America kumabvazuva kweIndia Territory. Oklahoma Territory neIndia Territory vakasanganiswa muNyika yeOklahoma pakazova nyika yechi 46 kupinda mubatanidzwa munaNovember 16, 1907. Nemakomo akareba, prairie, meses, uye masango ekumabvazuva, mazhinji eOklahoma ari munzvimbo dzakakura. Cross Timbers, uye iyo US Interior Highlands, matunhu ese anowanzo kuve nekushisa kwakanyanya. Oklahoma iri pane imwe nzvimbo nhatu nharaunda dzekuAmerica dzechivanhu uye kare dzakashanda senzira yekutyaira mombe, kwavanoenda kune vagari vekumaodzanyemba, uye nzvimbo yakatarwa nehurumende yevaNative America. Mitauro inopfuura makumi maviri neshanu yeNative American inotaurwa muOklahoma.Mugadziri mukuru wegasi, mafuta, uye zvigadzirwa zvekurima, Oklahoma anotsamira pahupfumi hwengarava, simba, kutaura nefoni, uye biotechnology. Vaviri Oklahoma Guta uye Tulsa vanoshanda seOklahoma vekutanga zvekusimbisa zvoupfumi, vaine zvikamu zviviri muzvitatu zveOklahomans vanogara mukati menzvimbo dzedhorobha.